Dr. Patrick Young, Author ka ah Steroid sida
Dr. Patrick Young ku qoray Gallery .
1. Dulmarka Synephrine HCL Maanta, tiro aad u sarreysa oo dadweynaha ah ayaa raadinaya ikhtiyaarro si loo ilaaliyo miisaanka caafimaadka leh. Hagaag, dhammaantood, adeegsiga budada Synephrine HCL waa mid ka mid ah qaababka ugu amaansan ee aad ku ilaalin karto dufanka aan caafimaadka qabin. Budada Synephrine waa walxo kiimiko ah alkaloid oo aan dhif ahayn in la helo. […]
1. Waa maxay Pyridoxal Hydrochloride? Pyridoxal Hydrochloride ama fiitamiin B6 waa fiitamiin biyo ku milma oo badanaa laga helo cuntooyinka. Waxaa badanaa loo istcimaa sida kabidda cuntada. Markii loo isticmaalo kabitaan ahaan, Pyridoxal Hydrochloride way daaweyn kartaa ama ka hor tagi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo badan. Badanaa waxaa lagu qaataa cirbad, afka ama kaabitaan cunto ah. Haddii aad tahay dhisme-dhise, fiitamiinkan […]
Jiritaanka galmada waxaa la rumeysan yahay inuu ku badan yahay ragga, oo uu nasiib u leeyahay; waxaa jira xulashooyin daaweyn oo kala duwan oo laga dooran karo dhammaantood dhammaantood Viagra, Cialis, iyo daroogada ED. Waxay kaloo leeyihiin daaweyn hormoon ah si ay gacan uga geystaan ​​soo celinta wadashaqayntooda galmada. Haweenka ayaa dareemaya in laga saaray tan. Nasiib wanaagse, iyaduna ikhtiyaar ayay leeyihiin. […]
Waa maxay Oxandrolone (Anavar)? Oxandrolone (53-39-4), oo leh budada Anavar sida magaceeda astaanta ah, waa isku darka daawada androgen-ka iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo aad caan ugu ah xooggeeda iyo awoodeeda kobcinta. Waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee loo adeegsado steroids anabolic steroids. Cudurka Anabolic wuxuu macnaheedu yahay inuu kor u qaadayo borotiinka unugyada, sidaas darteedna uu hogaaminayo […]
1.Waa maxay SR9009? SR9009 ama stenabolic waa CAS 1379686-29-9 dheeri ah oo la jaanqaadaya saameynta jimicsiyada wadnaha. Kaliya maaha dawadu inay kaa caawineyso inaad yareyso qaar ka mid ah dufanka jirkaaga xad-dhaafka ah, laakiin waxay sidoo kale kor u qaadi doontaa xasilloonidaada iyadoo sii kordhineysa adkeysiga. SR9009 waa xarun isku-dhafan, oo soo ifbaxday iyadoo loo marayo […]